အောက်တိုဘာလ 2013 |5၏စာမျက်နှာ 37 | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » 2013 » အောက်တိုဘာလ (စာမျက်နှာ 5)
SBWire (သတင်းထုတ်ပြန်ချက်) - Edgefactory OMNIMEDIA သူဟာ Emmy Award ဆုကိုဆွတ်ခူး Orlando တွင်ဗီဒီယိုထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီ,
Orlando တွင်ဗီဒီယိုထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီ, Edgefactory OMNIMEDIA သူဟာ Emmy Award ဆု SBWire (သတင်းထုတ်ပြန်ချက်) ရုပ်မြင်သံကြားဝိဇ္ဇာနှင့်သိပ္ပံများ၏အမျိုးသားအကယ်ဒမီ (NATAS) ဆွတ်ခူးအနုပညာနှင့်သိပ္ပံများ၏တိုးဖို့ဆက်ကပ်အပ်နှံတဲ့ professional ဝန်ဆောင်မှုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည် ... www.sbwire.com အပေါ်ကိုကြည့်ပါ
တွစ်တာ / LumaForge: LumaForge, ကျောက်, Areca ...
LumaForge, ကျောက်, Areca, Blackmagic ဒီဇိုင်း @ SMPTE 2013 t.co/2SYmAZR8mpSee twitter.com အပေါ်
SMPTE 2013: HEVC, Spotlight ကိုထဲသို့က Ultra HD အဆင့် ...
ဘယ်အချိန်မှာ Los Angeles မှာမျှော်လင့်ပတ်ရစ်ဟာ 2013 SMPTE နှစ်ပတ်လည်နည်းပညာဆိုင်ရာညီလာခံနှင့်ပြပွဲ, တက်ရောက်အနည်းဆုံး ... www အပေါ်ကိုကြည့်ပါပြောင်းလဲပစ်ရန်ကတိပေးကြောင်းနှစ်ခုသော့ချက်နည်းပညာများ, HEVC ချုံ့နှင့် "အပြင် HD ကို" တီဗီန်ဆောင်မှုမှလေးစားမှုနဲ့အတူစဉ်းစားရန်ပဒေသာရှိခဲ့ပါတယ်။ uhdtvmagazine.com
ဂျယ်ရမီ Clapin နဲ့ 'Palmipedarium' '၏အနုပညာ
ပြင်သစ်ကာတွန်းရုပ်ရှင်ဂျယ်ရမီ Clapin ပထမဦးဆုံး www.animationmagazine.net အပေါ် Annecy နှင့်ကိန်းရုပ်ရှင်ပွဲတော် Festival.See မှာဆုရာ 2008 အတွက်မိမိအမြင့်မား, မူရင်းရယ်စရာနှင့်မှောင်မိုက်အတို Skhizein နှင့်အတူပွဲတော်ကမ္ဘာ၏အာရုံစိုက်မှုကိုဖမ်းမိ
2013 IBA / SBE အိုင်တီအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲရောင်းသူ / အင်ဂျင်နီယာချုပ်မှတ်ပုံတင်ခြင်း engineer
IBA နှင့် SBE အိုင်တီအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ engineer အဆိုပါ 2013 IBA နှစ်ပတ်လည်များအတွက်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့စည်းဝေးကြ။ ကြှနျုပျတို့ကို Join! events.r20.constantcontact.com အပေါ်ကိုကြည့်ပါ
CCW Show ကိုအိမျ 4K ရတဲ့၏အဖြစ်မှန်ပေါ်အာရုံစူးစိုက်
အဲဒီမှာအတိုးများများ 4K အတွက်အကြောင်းအရာဖန်တီးခြင်းအတွက်ဖြစ်ပါတယ်သျောအဘယျကအိမ်ပြန်ဖို့ကရဖို့ယူကြမည်နည်း [အီးမေးလျ protected] ဆက်ဖတ်ရန်
Autodesk 360 ကမ်းတက် - Autodesk 360 ပြိုင်ပွဲအတွက် rendering
တခုက iPad အနိုင်ရမယ့်အခွင့်အလမ်းများအတွက် Autodesk Rendering Image ကိုပြိုင်ပွဲ, $ 500 လက်ဆောင်ကဒ်နှင့်ထို့ထက် ပို. ၌သင်တို့၏ဖန်ဆင်းခြင်းကိုချွတ်ပြပါ။ autodesk360innovates.com အပေါ် t.co/QzWcyrbXykSee
ဗီဒီယိုကို Technician အဂျော့ဘ်
Deluxe Entertainment ကမှာ Burbank ဗီဒီယို Technician အအလုပ်အကိုင်များ - အလုပ်ခေါင်းစဉ်: - Deluxe Entertainment က - ဗီဒီယို Technician အ, ဒီ Burbank,, CA (Post ကိုထုတ်လုပ်မှုဂျော့ဘ်ကဗီဒီယို Technician အတစ်အပြည့်အဝ TimeJob ဖြစ်ပါတယ် Burbank,, CA: ကျနော်တို့လက်ရှိ ... www အပေါ်ကိုကြည့်ပါတစ်ခုဖွင့်လှစ်ရှိသည်။ entertainmentcareers.net